Kungani uNkulunkulu engasebenzisi umuntu ukuba enze umsebenzi wokwahlulela ezinsukwini zokugcina kodwa esikhundleni salokho kufanele athathe isimo somuntu bese ekwenza Yena? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
“Ubaba akahluleli muntu, kodwa unikeze konke ukwahlulela eNdodaneni yomuntu…. Futhi umnikeze amandla nawokwahlulela, ngoba uyindodana yomuntu” (Johane 5:22-27).
Ukunahlulela Kwami kwanamuhla kungenxa yokungcola kwenu; ukunisola Kwami namuhla kungenxa yenkohlakalo kanye nokuhlubuka kwenu. Inhloso akusikho ukukhombisa amandla amakhulu nokulaleleka phakathi kwenu noma ukunihlupha ngenhloso, kodwa yingoba nina eniphila ezweni lokungcola nilinyazwe ukungcola okukhulu. Nivele naphelelwa ubuqotho benu, ubuntu benu, futhi anehlukile ezingulubeni ezihlala ezindaweni ezinyanyekayo. Ngenxa yalokhu niyahlulelwa ngalezi zinto futhi ulaka Lwakhe lwehlela phezu kwenu. Ngenxa yalokhu kwahlulelwa nikwazile ukubona ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu olungile, ukuthi uNkulunkulu unguNkulunkulu ongcwele. Ngenxa yobungcwele nokulunga Kwakhe unahlulele futhi waletha ulaka Lwakhe phezu kwenu. Ngenxa yokuthi angaveza isimo Sakhe sokulunga uma ebona ukuhlubuka kwesintu, nangenxa yokuthi angaveza ubungcwele Bakhe uma ebona ukungcola kwesintu, lokhu kwanele ukuveza ukuthi unguNkulunkulu uqobo Lwakhe ongcwele nongenasici, kodwa naye futhi owazalelwa ezweni elingcolile. Ukube ubengumuntu ozingcolisa kanye nabanye futhi engenakho okumyizimpawu zobungcwele noma isimo sokulunga, ubengeke afaneleke ukwahlulela ukungalungi kwesintu noma ukwahlulela isintu. Ukuba umuntu ubengahlulela umuntu, bekungeke yini kufane nokuzishaya ngempama ebusweni? Angakwazi kanjani umuntu ukuba nelungelo lokwahlulela uhlobo lomuntu olufana naye, ongcole njengaye? Okunguye kuphela ongahlulela sonke isintu esingcolile uNkulunkulu ongcwele uqobo, futhi umuntu angakwazi kanjani ukwahlulela izono zomuntu? Umuntu angakwazi kanjani ukubona izono zomuntu futhi angakufanela kanjani ukulahla umuntu ngecala? Uma uNkulunkulu ubengenalo ilungelo lokwahlulela izono zomuntu, ubengaba kanjani uNkulunkulu olungile? Uma izimo zenkohlakalo zabantu zidalulwa, ukhuluma ngokubahlulela, futhi yilapho kuphela lapho bengabona khona ukuthi ungcwele.
Kubo bonke labo abaphila enyameni, ukuguqula isimo sabo kudinga ukuthi babe nemigomo yokulandelwa, futhi ukwazi uNkulunkulu kudinga ukuba ukufakaza ngezenzo Zakhe zangempela nobuso Bakhe bangempela. Kokubili lokhu kungafezwa ngenyama kaNkulunkulu osesimweni somuntu kuphela, futhi kokubili kungafezwa kuphela ngenyama evamile nengokoqobo. Yingakho ukuba sesimweni somuntu kudingekile, futhi yikho okwenza adingwe yiso sonke isintu esikhohlakele. Njengoba abantu kudingeka ukuthi bazi uNkulunkulu, izithombe zoNkulunkulu abangaqondakali futhi abanamandla angaphezu kwemvelo kumele zixoshwe ezinhliziyweni zabo, futhi njengoba kudingeka ukuba balahle isimo sabo esikhohlakele, kumele bazi kuqala isimo sabo esikhohlakele. Uma umuntu enza kuphela umsebenzi ngenjongo yokuxosha izithombe zoNkulunkulu abangaqondakali ezinhliziyweni zabantu, ngeke-ke aphumele ukufeza umphumela ocacile. Izithombe zoNkulunkulu abangaqondakali abasezinhliziyweni zabantu azinakwembulwa, zisuswe noma zixoshwe ngokuphelele ngamazwi kuphela. Ngokwenza kanjalo, ekugcineni kuyoba yinto engenakwenzeka ukukhipha lezi zinto ezijulile kubantu. UNkulunkulu ongokoqobo kuphela nesithombe sangempela sikaNkulunkulu okungangena esikhundleni salezi zinto ezingaqondakali nezinamandla angaphezu kwavamile ukwenza abantu ukuba bamazi kancane kancane, futhi lokhu kungafezwa ngale ndlela kuphela. Umuntu uyabona ukuthi uNkulunkulu ayemfuna ngezinye izikhathi ezedlule akaqondakali futhi unamandla angaphezu kwavamile. Into engazuza lokhu akukhona ukuhola okuqondile kukaMoya, ingasaphathwa eyezimfundiso zomuntu, kodwa uNkulunkulu osesimweni somuntu. Imicabango yomuntu isala ngemuva lapho uNkulunkulu osesimweni somuntu esenza umsebenzi Wakhe, ngoba ukuvama nokuba ngokoqobo kukaNkulunkulu osesimweni somuntu kungqubuzana nonkulunkulu abangaqondakali nabanamandla angaphezu kwavamile abasezingqondweni zabantu. Umcabango oyiwona womuntu ungembulwa kuphela ngokuthi uqhathaniswe noNkulunkulu osesimweni somuntu. Ngaphandle kokumqhathanisa noNkulunkulu osesimweni somuntu, imicabango yomuntu ayisobe yembulwa; ngamanye amazwi, ngaphandle kokuqhathanisa, ukuba ngokoqobo kwezinto ezingaqondakali akusobe kwembulwa. Akekho okwazi ukusebenzisa amazwi ukuze enze lo msebenzi, futhi akekho okwazi ukucacisa lo msebenzi esebenzisa amazwi. NguNkulunkulu kuphela ongenza umsebenzi Wakhe, futhi akekho omunye ongenza lo msebenzi esikhundleni Sakhe. Akunandaba ukuthi ulimi olukhulunywa umuntu lucebe kangakanani, ngeke akwazi ukuveza ukuba ngokoqobo nokuvama kukaNkulunkulu. Umuntu uNkulunkulu angamazi kangcono, futhi ambone ngokucacile, uma uNkulunkulu esebenza Yena mathupha phakathi kwabantu futhi aveze indlela abukeka ngayo nesiqu Sakhe. Lokhu ngeke kufezwe yinoma imuphi umuntu wenyama. … Ngakho, isintu esikhohlakele siyidinga kakhulu insindiso kaNkulunkulu osesimweni somuntu, futhi siwudinga kakhulu umsebenzi oqondile kaNkulunkulu osesimweni somuntu. Isintu sidinga ukuba uNkulunkulu osesimweni somuntu aseluse, aseseke, asiphuzise, asondle, asahlulele futhi asijezise, futhi siwudinga kakhulu umusa nokutakulwa uNkulunkulu osesimweni somuntu. UNkulunkulu wenyama kuphela, ongaba ithemba lomuntu, umelusi womuntu, nosizo lwamanje lomuntu, futhi konke lokhu kuyisidingo sikaNkulunkulu osesimweni somuntu namuhla nasezikhathini ezedlule.
Yingoba impela uSathane wonakalisile inyama yomuntu, nokuthi umuntu nguye uNkulunkulu ahlose ukumsindisa, yingakho uNkulunkulu kufanele athathe isimo senyama ukuze alwe noSathane nokuthi eluse umuntu yena ngokwakhe. Yilokhu kuphela okuwusizo emsebenzini wakhe. Imizimba yenyama emibili kaNkulunkulu ibekhona ukuze ehlule uSathane, futhi ibe khona ukuze asindise umuntu kangcono. Ingoba lowo olwa noSathane kungaba uNkulunkulu kuphela, noma nguMoya kaNkulunkulu noma uNkulunkulu ethathe isimo somzimba. Ngamafuphi, lowo olwa noSathane akukwazi ukuba kube izingelosi, kungasaphathwa umuntu, owonakaliswe nguSathane. Izingelosi azinamandla okukwenza, kanti umuntu akanamandla futhi nangaphezulu. Kanjalo, uma uNkulunkulu efuna ukusebenza impilo yomuntu, uma efisa ukuza yena mathupha emhlabeni ukusebenza umuntu, kufanele athathe isimo senyama mathupha, kanti nangobuyena bakhe bemvelo kanye nomsebenzi okufanele awenze, afike phakathi kwabantu futhi Asindise umuntu mathupha. Uma kungenjalo, uma bekunguMoya kaNkulunkulu noma umuntu obenza lo msebenzi, lempi beyizohluleka unomphela ukufeza umphumelo wayo, futhi beyingeke ize iphele. Kuphela uma uNkulunkulu ethatha isimo senyama ukuyolwa noSathane mathupha phakathi kwabantu ilapho umuntu eyoba nethuba lokusindiswa. Ngaphezu kwalokho, yilapho kuphela uSathane ezothola ukujabhiswa, futhi asale engenamathuba angawasebenzisa noma amacebo angawenza. Umsebenzi waNkulunkulu onesimo sesintu ngeke ufezwe uMoya kaNkulunkulu, futhi nangaphezulu ngeke wenziwa umuntu wenyama ewenzela uNkulunkulu, ngoba umsebenzi awenzayo ngowempilo yomuntu. Uma umuntu ubengabamba iqhaza kule mpi, ubezobaleka esebuphixiphixini obudabukisayo kuphela, futhi ubengeke akwazi nempela ukushintsha isimo somuntu esonakele. Ubengeke akwazi ukusindisa umuntu esiphambanweni, noma ukugoqa sonke isintu esidlubulundayo, kodwa ubezokwazi ukwenza umsebenzana nje omncane ngesimiso, noma umsebenzi ongaphathelene nokuhlulwa kukaSathane. Ngakho-ke ingabe uzihluphelani? Kuyini ukubaluleka komsebenzi ongeke uzuze isintu, kungasaphathwa okokwehlula uSathane? Ngakho-ke, impi noSathane ingenziwa kuphela uNkulunkulu uqobo lwakhe, futhi ngeke kumane kwenziwe umuntu. Umsebenzi womuntu ukulalela nokulandela, ngoba umuntu akakwazi ukwenza umsebenzi wokuqala inkathi entsha, noma, ngaphezu kwalokho, enze umsebenzi wokwehlula uSathane. Umuntu angenelisa uMdali ngaphansi kokuholwa nguNkulunkulu uqobo lwakhe, ngalokho uSathane uyahlulwa; iyo kuphela into umuntu angayenza. Ngakho, njalo lapho impilo entsha iqala, okungukuthi, umsebenzi wenkathi entsha uqala, lo msebenzi wenziwa nguNkulunkulu uqobo Lwakhe mathupha, ngaleyo ndlela uhola inkathi yonkana, futhi uvula indlela entsha yesintu.
Okwedlule：Yini umehluko phakathi komsebeni kaNkulunkulu esenyameni kanye nomsebenzi kaMoya?
Okulandelayo：Yini umehluko obalulekile phakathi kukaNkulunkulu esimweni somuntu kanye nalabo bantu abasetshenziswa uNkulunkulu?
2. Yini umehluko phakathi komsebenzi walabo abasetshenziswa nguNkulunkulu kanye nomsebenzi wabaholi benkolo? Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UJesu w…